Ciidamada Nabadsugida Galmudug iyo Ciidamo Mareykan ah oo saldhig ka sameysanaya Xeebaha Mudug | Sagal Radio Services
Ciidamada Nabadsugida Galmudug iyo Ciidamo Mareykan ah oo saldhig ka sameysanaya Xeebaha Mudug
Saraakiisha Nabadsugida Maamulka Galmudug ayaa ka warbixiyay ujeedka howl galadii dhowaan ka fuliyeen deegaano ka tirsan Gobolka Mudug, iyagoo markii u horeysay ka hadlay in howl galada ay ku wehliyaan Ciidamo Mareykan ah iyo kuwa maamulka Puntland.
Taliyaha Nabadsugida Galmudug Saadaq Cumar Xasan ayaa sheegay in howl galada ay fulinayaan ciidamada wada jirka uu yahay sidii loola dagaalami lahaa Al-Shabaab iyo kooxaha burcad badeedka.
Waxaa uu sheegay Mareykanka iyo dowladda Soomaaliya ay gacan ka geysanayaan sidii xero ciidan looga hirgelin lahaa xeebaha Mudug, gaar ahaan degmada Hobyo.
“Hada waxaa joognaa degmada Hobyo, waxaa rabnaa inaan xarun milateri ka sameysano, maadaama Ciidamada Galmudug ay ka dheer yihiin deegaanada xeebaha Mudyg, qeyb ka mid ah ay heystana Al-Shabaab”ayuu yiri Saadaq Cumar Xasan.
Mar uu ka hadlayay howl galada ay kula wehliyaan Ciidamada Puntland ayuu sheegay inay magaca ka dhaxeeya uu yahay hal ciidan, isla markaana aanay cadaw isku aheyn sida uu yiri.
Dadka deegaanka Gobolka Mudug ayaa sheegay in ciidamo Mareykan ah oo wata gawaarida gaashaaman, ciidamada nabadsugida Galmudug iyo ciidanka Puntland ayaa maalmo ka hor weerar ku qaaday deegaano ka tirsan Koofurta Mudug, iyagoo dagaal kooban la galay Al-Shbaaab.
Ciidamadan huwanta ahaa ayaa ujeedkooda ahaa inay la wareegaan degamda Xarardheere oo ay gacanta ku hayaan Al-Shababa, hase ahaatee ay dib uga soo laabteen.